Sida loo wanaajiyo tayada kamaradda Samsung Galaxy Note 4 | Androidsis
Sida loo horumariyo tayada kamaradda Samsung Galaxy Note 4 oo leh mod-kan
Francisco Ruiz | | Samsung, Tababarada
Muddo ayaa laga joogaa ilaa isaga Samsung Galaxy Note 4 ayaa naga mid ah. Tan iyo markii aan la kulannay horraantii Sebtember hareeraha IFA BerlinShaki la'aan waxay ahayd terminaal aan haba yaraatee naga tagin, kala sarreynta kuwa ugu fiican xilligan oo leh tilmaamo farsamo oo cajiib ah iyo qalab iyo softiweer gaar ah. In kasta oo mararka qaarkood, sida kiiska aan maanta idiinku soo bandhigi doono, aan macquul ahayn in lagu cadaadiyo xitaa inbadan oo awooddeeda qarsoon.
Xaaladda maanta, mar labaad ayaa mahad leh XDA horumariyayaal madaxbannaan, wax badan ayaan ka heli karnaa Kaamirada Samsung Galaxy Note 4 mahadsanidiin qaabkan dhameystiran ee ay ka wadaagaan madasha horumarinta ee kor ku xusan ee Android. Moodo oo hagaajin doonta tayada kamaradda Samsung Galaxy Note 4 marka la eego tayada duubista fiidiyowga iyo duubista sidoo kale kordhin doonta muddada la sii cayimay iyadoo loo eegayo tayada fiidiyowga ee kala duwan.
1 Muxuu si sax ah noo siinayaa moodeelkan oo hagaajinaya tayada kamaradda Samsung Galaxy Note 4?
2 Sideen ugu rakibaa Samsung Galaxy Note 4?
3 Habka 1: ka soo kabashada wax laga beddelay:
4 Habka 2: laga soo bilaabo sahamiyaha faylka xididka:
Muxuu si sax ah noo siinayaa moodeelkan oo hagaajinaya tayada kamaradda Samsung Galaxy Note 4?
Waxyaabaha ugu muhiimsan ee lagu muujiyo qaabkan 'mod for' hagaajinta tayada kamaradda Samsung Galaxy Note 4, waxaan ku fududeyn karnaa xariiqyadan:
Tayada JPEG waxay kordhay 100%.
DUAL FHD waqtiga ugu badan ee wax lagu qoro illaa 10 daqiiqo.
UHD waqtiga ugu badan ee wax lagu qoro illaa 30 daqiiqo.
Tayada dhaqdhaqaaqa jilicsan ayaa ka kordhay 24Mbit ilaa 65mbit
Tayada FHD waxay ka kordhay 20Mbit ilaa 40Mbit
Sideen ugu rakibaa Samsung Galaxy Note 4?
Si aad ugu rakibto Samsung Galaxy Note 4, waxaan u baahan doonaa terminal horay loo rujiyay, iyo haddii aad iftiimisay Soo-kabashada la beddelay si ka fiican sidii tan ka wanaagsan biligleynaya feyl fudud oo ZIP ah si fudud ayaan ku helaynaa. In kasta oo tan dambe aysan daruuri ahayn gabi ahaanba tan iyo wixii raadiyaha faylka ah ee Root-ka waxaan si fudud ugu heli karnaa qaybta nidaamka si aan ugu dhajino faylasha lagama maarmaanka u ah waddooyinkooda u dhigma oo aan u beddelno rukhsadaha.
Habka 1: ka soo kabashada wax laga beddelay:
Kaydso sawir kaliya si loo muujiyo qaabka soo kabashada ee wax laga beddelay
Midka ugu horeeya wuxuu ahaan doonaa Gali boggan oo soo dejiso ZIP sida ku xusan qaabka processor-ka ee Samsung Galaxy Note 4, sidoo kale Exynos o Snapdragon.
Waxaan dib ugu bilaabaneynaa qaabka soo kabashada waxa ugu horeeya ee aan sameyn doonana waa a nadaamka nadroid ee dhamaan nidaamkayagu wuu shaqeeyaal haddii ay dhacdo habka biligleygu u guuldareysto ama aan ka helno nooc ka mid ah iswaafajin ama cillad kaamerada.
Ikhtiyaar ahaan Ku rakib zip ka sdcard, waxaan dooraneynaa zip-ka mod-ka waxaanan xaqiijinaynaa rakibiddiisa.
Waxaan dib uga bilaabi doonnaa Samsung Galaxy Note 4 ikhtiyaarka Nidaamka reboot hadda.
Habka 2: laga soo bilaabo sahamiyaha faylka xididka:
Laga soo bilaabo sahamiyaha faylka xididka waa inaan marinaa wadada nidaam / barnaamij oo xulo feylasha Samsungcamera3.apk iyo SamsungCamera3.odex oo u wareeji kaarka xusuusta si ay ugu hayaan haddii aan rabno inaan dib u soo ceshanno barnaamijyadeenna asalka ah. Marka tan la dhammeeyo, waxaan nuqul ka qaadnaa apk-ka la soo dejiyey sida ku xusan nooca Samsung Galaxy Note 4 isla wadadaas isla markaana beddel rukhsadaha sida aan ku arki karno sawirka feylkan:
Waxaan sidoo kale ku sameynaa feylka media_profiles.xml inkasta oo ay kudayanayaan wadada nidaam / iwm sidoo kale waxaan bedelnaa rukhsadaha si waafaqsan sawirka kore.
Waxaan kaliya yeelan doonaa taas dib u bilaabi terminaalkaIsaga iyo annaguba waxaan horay ugu raaxeysan doonnaa qaabkan xasaasiga ah ee sii kordhaya iyo waxay hagaajineysaa tayada kamaradda Samsung Galaxy Note 4 hab gebi ahaanba cajiib ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Samsung » Sida loo horumariyo tayada kamaradda Samsung Galaxy Note 4 oo leh mod-kan
Ma lagu sameyn karaa qoraalka 3? Mahadsanid.
Jarmalka ruiz dijo
Fiid wanaagsan, ma ii sheegi kartaa nooca exynos ee sm-n910u 8 ama 9, salaan
Ku jawaab geriz ruiz
Waa inaad ku dartaa macluumaadkan si aad u raadiso tusaalaha, muuqaalka moobiilka ee goobaha / qalabka iyo nambarka nambarka, fiiri safka bidix, processor-ka kaameeraha ayaa ah midka ka muuqda safka dhexe (snapdragon ama exynos) iyo safka midig wuxuu tilmaamayaa aagga moodeelka:
SM-N9100 Snapdragon 805 Shiinaha Dual SIM, LTE / GSM
SM-N9106W Snapdragon 805 Shiinaha Unicom Dual SIM, LTE / GSM
SM-N9108V Snapdragon 805 Shiinaha Mobile LTE
SM-N9108W Snapdragon 805 Shiinaha Mobile Dual SIM, LTE / GSM
SM-N9109W Snapdragon 805 Shiinaha Telecom Dual SIM, LTE / GSM
SM-N910C Exynos 5433 Aasiya, Yurub, Koonfurta Ameerika LTE
SCL24 Snapdragon 805 Japan AU LTE
SCL-01G Snapdragon 805 Japan Docomo LTE
SM-N910F Snapdragon 805 Yurub LTE
SM-N910FD Snapdragon 805 Isutagga Imaaraatka Carabta Dual SIM, LTE / GSM
SM-N910FQ Snapdragon 805 Turkey LTE
SM-N910G Snapdragon 805 Singapore, Sri Lanka, Hindiya LTE
SM-N910H Exynos 5433 Asia Pacific WCDMA
SM-N910K Exynos 5433 Kuuriya KT + LTE
SM-N910L Exynos 5433 Korea LG + LTE
SM-N910S Exynos 5433 Korea SKT LTE
SM-N910U Exynos 5433 Hong Kong, Taiwan, Australia, New Zealand, Chile LTE
SM-N910W8 Snapdragon 805 Waqooyiga Ameerika LTE
SM-N910X Snapdragon 805 LTE nooca tijaabada ah
Dhamaan waad salaaman tihiin, waxaan rajaynayaa inay kuu adeegto
Ku jawaab Clacks
Abel ojeda dijo
Hal su'aal, ma jiraa qof yaqaan sida dib loogu noqdo kamaradii asalka ahayd? Maaddaama mods-ka aysan ii oggolaaneynin inaan ku daro qaabab kale oo toogasho ah markay doonayaan inay galaan oo ay ku daraan, waxaa ii soo baxday in kaamiradu istaagtay oo aan tirtiray xogta iyo dhammaan wixii ku jiray barnaamijka iyo waxba, fadlan, waxaan xusay inaanan waxba samayn gurmad maxaa yeelay uma aanan maleynin inay lama huraan tahay lol qosol dhankeyga ah laakiin waxay ahayd sidaas oo kale lol waan ku qanacsanahay kaalmadaada mahadsanid!
Jawaab Abel Ojeda
RAFAEL ku xigeenka dijo
LOOGU TALAGALAY FRANCISCO RUÍZ:
Waxaan hayaa XUSUUS-4 bilaash ah oo laga iibsaday Spain, SM-N910F oo leh QUALCOMM SNAPDRAGON 805 AQP8084
Sida ku xusan tilmaamahaaga, iyo tillaabadan:
(◾ Marka ugu horeysa waxay noqon doontaa inaad gasho boggan oo aad soo degsato ZIP sida ku xusan qaabka processor-ka ee Samsung Galaxy Note 4, Exynos ama Snapdragon midkood)
1 - Waxaan arkaa in, marka la galayo bogga soo-dejinta qoraaga, ee loogu talagalay qaabka processor-ka, ay jiraan 9 fayl oo leh nambaro lambarro leh: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9.3 , Faylka APK ee SamsungCamera.
2 - Nooc kasta oo ka mid ah APK SamsungCamera wuxuu ku dhammaadaa illaa 3 xaraf oo kala duwan:
SHAQAYNTA WAYN IYO SUAASHA:
Waa maxay faylka (galka, nooca iyo xarafka) ee APK SamsungCamera. Ma saxbaa oo miyaan soo dejiyaa oo aan ku rakibaa qaabkeyga XUSUUS-4 ee aan ku sheegay bilowgii?
Aad baad u mahadsantahay warna waan ka sugayaa.
Jawaab RAFAEL VICENTE
Sida loo daawan karo fiidiyowyada asalka ah Android ee leh FREEdi
Kooxda Mashruuca Ara waxay diyaariyeen moodeel leh hawlo oksimeter